Wararka - Iskaashatada Dhameystiran ee Dhaqaalaha Gobolka (RCEP)
Iskaashatada Dhameystiran ee Dhaqaalaha (RCEP)
Tani waa guul u soo hoyatay dhinacyada badan iyo ganacsiga xorta ah. Cudurka faafa wuxuu ku faafay aduunka oo dhan, ganacsiga caalamiga iyo maalgashiga si aad ah ayey u yaraadeen, silsilada sahayda ee silsiladaha warshadaha waa la xannibay, isla markaana caalamiyeynta dhaqaalaha ayaa la kulantay wax ka soo horjeedka xilligan, midnimada iyo ilaalinta ayaa kordhay Dhammaan xubnaha RCEP waxay sameeyeen ballanqaad wadajir ah oo lagu yareynayo canshuuraha, suuqyada furan, yareynta caqabadaha, iyo in si adag loo taageero caalamiyeynta dhaqaalaha. Marka la eego xisaabinta hay'ad cilmi baaris caalami ah, RCEP waxaa la rajeynayaa in ay waddo koror saafiya oo ah 519 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo la dhoofiyo iyo 186 bilyan oo doolar oo dakhli qaran ah sanadkiiba marka la gaaro 2030. Saxiixa RCEP wuxuu si buuxda u muujinayaa dabeecadda goynta cad ee dhammaan Xubnaha. Dawlado ka soo horjeeda hal dhinac iyo ilaalinta. Codka wadajirka ah ee lagu taageerayo ganacsiga xorta ah iyo nidaamka ganacsi ee dhinacyada badan leh ayaa la mid ah iftiinka dhalaalaya ee cirka isku shareeraya iyo diirimaad diiran oo ku socda dabaysha qabow. Waxay si weyn kor ugu qaadi doontaa kalsoonida dalalka oo dhan xagga horumarka waxayna ku duri doontaa tamar wanaagsan wax wada qabsiga cudurrada faafa ee caalamiga ah iyo soo kabashada dhaqaalaha adduunka.
Xawaareynta dhismaha shabakad ganacsi oo caalami ah oo heer caalami ah oo xor ah
Iskaashiga Iskaashiga Dhameystiran ee Gobolka (RCEP), oo ay bilaabeen tobanka dal ee ASEAN, waxay ku martiqaadayaan Shiinaha, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Australia, New Zealand, iyo Hindiya inay kaqeyb qaataan ("10 + 6 ″).
"Heshiiska Iskaashiga Dhaqaalaha ee Dhamaystiran ee Gobollada" (RCEP), oo ah heshiis ganacsi oo ka socda gobolka Aasiya iyo Baasifigga, waxay ku xidhan tahay inay soo saarto saameyn ganacsi oo weyn Isagoo diiradda saaraya warshadaha wax soo saarka adduunka, qaabka GTAP ayaa loo adeegsadaa in lagu ekeysiiyo saameynta RCEP ay ku leedahay qeybsiga shaqada ee warshadaha wax soo saarka adduunka, waxaana la ogaaday in RCEP ay saameyn weyn ku leedahay qeybsanaanta shaqaalaha ee warshadaha wax soo saarka adduunka. Dhameystirkeedu wuxuu sii kordhin doonaa booska gobolka Aasiya ee adduunka; RCEP ma kobcin doonto oo keliya wax soo saarka Shiinaha Kordhinta dhoofinta warshadaha iyo kordhinta saamiga suuqyada adduunka ayaa sidoo kale ku habboon kor u qaadista silsiladda qiimaha adduunka.
Wadashaqeynta isdhexgalka dhaqaalaha ee gobolka oo ay hogaamiso ASEAN waa qaab qaab urureed oo dowladaha xubnaha ka ah ay isku furaan suuqyo isla markaana u hirgeliyaan isdhexgalka dhaqaalaha gobolka.
Adoo yareynaya canshuuraha iyo caqabadaha aan canshuuraha laheyn, sameyso heshiis ganacsi oo xor ah oo lala yeesho suuq mideysan oo ka kooban 16 dal
RCEP, aragti qurxoon, sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadda caalamiga ah ee dalkayga, waana sugi karnaa oo arki karnaa oo keliya!